साताको शेयर कारोबारः लगानीकर्ताको लागि सुखद हुन सकेन – Insurance Khabar
(July 26, 2021)
साताको शेयर कारोबारः लगानीकर्ताको लागि सुखद हुन सकेन
प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १८:२१
काठमाडौं । गत साता तीव्र उत्साहसाथ शेयर खरिद गरिरहेका लगानीकर्ताहरु यो साताको पहिलो दिन अत्तालिएर शेयर बिक्री गर्न थाले । अघिल्लो साता कारोबार बन्द हुँदा १६३२ रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको आइतबार घटेर १५९१मा झर्यो । त्यस्तै दोस्रो दिन सोमबार लगानीकर्ताहरुको लागि कालो दिन नै सावित भयो ।
साताको पहिले दिन १५९१ दशमलव ३६ अंकमा रहेको परिसूचक रहेको नेप्से सोमबार ६ प्रतिशत घटेर सर्किट लागेर कारोबार अघि नै बन्द हुन पुग्यो । नेप्सेको नियम अनुसार एकैदिन छ प्रतिशतभन्दा बढिले बजार घटेपछि सो दिनको कारोबार बन्द हुनेछ । सर्किट लागेसँगै सोमबार नेप्से आईतबारको तुलनामा घटेर १४९५ दशमलव ३० अंकमा पुगेको थियो । सोमबार घटेको नेप्से पुनः मंगलबार बढेर १५०९ दशमलव ६७ मा कायम भयो ।
झिनो अंकले बढेको भएपनि टिक्न सकेन र बुधबार पुनः घट्दै १४४१ मा आईपुग्यो । साताको अन्तिम दिन बिहिबार पनि लगानीकर्ताहरुको लागि सुखद हुन सकेन । निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको नेप्से परिसूचक १४३५ झरेर कारोबार बन्द भएको छ ।
अर्थमन्त्रीमा भएको फेरबदल तथा कोरोना भाइरसको कारण पार्न सक्ने प्रभावबारे विभिन्न आधारहिन विश्लेषणका कारण शेयर बजार तल भर्ने क्रम झरेको अनुमान गरिएको छ ।
नबिल बैंकले ल्यायो कर्जाको लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने सुविधा
मेगा बैंक र नागरिक एपबीच सम्झौता
प्रोभिजनिङको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको मुनाफा ७ अर्ब ४० करोडले घट्ने, बोनस शेयर वितरण गर्न राष्ट्र बैंकको जोड
लघुवित्तको लाभांस वितरणमा थप कडाइ
बैंकहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थपियो
बैंकहरुको नाफा घट्ने, असल कर्जाको पनि १.३० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने
जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे ४१ अर्ब ९७ करोड प्रथम बीमा शुल्क, कसको कति ? (सूचिसहित)
बीमा कम्पनीका कर्मचारीले पाकेको बोनस पाउन दुई तीन वर्ष कुर्नु पर्ने !
नेपाल लाइफद्धारा मृतकको परिवार लाई १ करोड २४ लाख रुपैयाँ मृत्यु दाबी भुक्तानी
बीमा समितिको अण्डरराइटिङ प्रमुखहरु सँग छलफल, अनाबश्यक टार्गेटले अण्डरराइटिङलाई बेवास्था
बीमा समितिकै निर्देशनलाई अटेर गर्दै कम्पनीहरु, अर्बौ रुपैयाँको सरेण्डर हुने भए पछि समितिको साथ खोज्दै
निर्जीवन बीमा कम्पनीले उधारो पोलिसी बिक्री गर्न बन्द गरे
आ.ब २०७७ /७८ मा ३९ वटा बीमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क १ खर्ब ५१ अर्बमाथि
नेपाल ईन्स्योरेन्सले भुक्तानी गर्यो पच्चिस लाख दाबी भुक्तानी